Ap1 Khabar | वि. सं. २०७८ असार ३ गते, बिहीवार - Ap1 Khabar वि. सं. २०७८ असार ३ गते, बिहीवार - Ap1 Khabar
Sabitri Dhungana २०७८ असार ३, बिहीबार ०८:१०
२०७८ असार ३ गते, बिहीवार, १७ जुन २०२१। ज्येष्ठ शुक्लपक्ष, सप्तमी तिथि। पूर्वफाल्गुनी नक्षत्र। चन्द्रराशि– सिंह।
स्वयं चिकित्सा गर्नाले दबाइको निर्भरता हुन सक्छ। कुनै पनि दबाइ लिनु अघि चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् – अन्यथा दबाइका निर्भरताको सम्भावना उँचो छ। तपाईंको जोडी मद्दतगार र सहयोगी हुनेछ। आफ्नो बोलीको नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुहोस् किनकि तपाईंका कठोर शब्दले अशान्ति फैलाउँछ र आफ्नी प्रियतमासँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ। आफ्नो नयाँ योजना राम्ररी बुझ्नको लागि तपाईंले महत्त्वपूर्ण र महत मान्छे भेट्ने उचित दिन। आज छिमेकीहरूले गलत तरिकामा तपाईंको परिवार र साथीहरूलाई तपाईंका वैवाहिक जीवनको व्यक्तिगत पक्ष पर्दाफास गर्न सक्छन्।
तपाईंको ऊर्जा स्तर उँचो हुनेछ। तपाईंको ज्ञानको तिर्खाले नयाँ मित्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। कसैको लागि व्यापार र शिक्षा लाभ हुनेछ। तपाईंको वैवाहिक जीवनमा आज सबै खुसी देखिन्छ।
स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ। तपाईंको जोडी मद्दतगार र सहयोगी हुनेछ। आजको दिन खुशी र आनन्दले भरिएको सुंदर सन्देशले भरिएको छ। उद्योग गर्ने मान्छेसँग साझेदारीमा उद्यम गर्नुहोस्। तपाईंको जोडी यति सुन्दर कहिल्यै थिएन। तपाईंलाई आफ्नो जीवनको प्रेमबाट राम्रो आश्चर्य प्राप्त हुन सक्छ।
तपाईंको धैर्यलाई लगातार प्रयासको साधारण अर्थमा र समझसँग राख्नुहोस् जसले तपाईंको सफलताको ग्यारेन्टी रहनेछ। तपाईँको आशा अनुसार बन्नको लागि आफ्नो बच्चालाई उत्प्रेरित गर्नुहोस्। उसले प्रयास गर्नाले चमत्कार हुन्छ भन्ने आशा तर नगर्नुहोस्। तपाईंको प्रोत्साहनले निश्चय नै उसको हौसला बढ्नेछ। कसैको नयाँ रोमान्सले तपाईंको आत्माको उत्थापन गर्दछ र तपाईंलाई खुसीको मुडमा राख्छ। काममा मान्छेसँग काम गर्दा बुद्धि, धैर्य र सावधानी अपनाउनुहोस्। आज तपाईंको वैवाहिक जीवनमा मज्जा, खुशी र परम आनन्द आउनेछ।
तपाईंको दयालु प्रकृतिले आज धेरै खुसीयाली ल्याउनेछ। जवानहरू संलग्न भएका गतिविधिहरुमा संलग्न हुने राम्रो समय हो। प्रेम सम्बन्ध बारे चर्को हल्लाखल्ला नगर्नुहोस्। तपाईंले आज आफ्नो काममा प्रगति देख्न सक्नु हुनेछ। आफ्नो छिमेकीले तपाईंको वैवाहिक जीवनमा समस्या बनाउने प्रयास गर्न सक्छ, तर यसले तपाईंहरूको प्रेमको बन्धन हल्लाउन गाह्रो छ।
धेरै त्रसित धटनाहरूले तपाईंको प्रतिरोध गर्ने र सोच्ने शक्ति कमजोर गराउँछ। सकारात्मक सोच लिएर रोग विरुद्ध लड्नुहोस्। आफ्नो जोडीसँग राम्रो समझदारीले घरमा शान्ति, संवृद्धि र आनन्दमा ल्याउँछ। रोमान्सका लागि राम्रो दिन। तपाईंको रचनात्मक कार्यले तपाईंका वरिपरिका मानिसहरूलाई विस्मित पार्नेछ र तपाईंलाई धेरै प्रशंसा दिएर जीत गराउनेछ। तपाईं आफ्नो कामुक वैवाहिक जीवनमा एउटा सुन्दर परिवर्तन अनुभव गर्न जानु हुँदैछ।
मुस्कान अविरल रूपमा तपाईंको अनुहारमा हुने र अपरिचित पनि परिचित जस्तो लाग्ने दिन। तपाईंले वित्तीय लाभ हुने शानदार नयाँ विचार गर्नु हुनेछ। घरेलू विषय र बाँकी रहेका घरेलू काम सक्ने अनुकूल दिन। सपनाको चिन्ता छोडेर आफ्नो रोमान्टिक साथीसँग आनन्द मनाउनुहोस्। आज तपाईं रोशनीमा हुनुहुनेछ – र सफलता तपाईंको सामर्थ्य भित्रै छ। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको बारेमा सबै राम्रो कुरा गरेर प्रशंसा गर्नेछिन् र तपाईंको लागि समर्पण गर्नेछिन।
तपाईंको धैर्यलाई लगातार प्रयासको साधारण अर्थमा र समझसँग राख्नुहोस् जसले तपाईंको सफलताको ग्यारेन्टी रहनेछ। तपाईंले बचत हुने लगानीमा लगानी गर्नुभयो भने राम्रो पैसा कमाउनु हुनेछ। तपाईंसँग आज सीमित धैर्य हुनेछ – तर कठोर वा असंतुलित बोलीले तपाईंका वरिपरि मानिसहरूलाई नराम्रो लाग्न सक्छ भन्ने ध्यान राख्नुहोस्। तपाईंलाई आफ्नो रचनात्मकता हराएको छ भन्ने महसुस हुनेछ र तपाईंलाई निर्णय गर्न अत्यन्तै कठिन हुनेछ। वैवाहिक जीवनमा धेरै आशाले आज तपाईंलाई दुःखतिर धकेल्न सक्छ।
आफ्नो बाध्यात्मक भावना र धडकनहरूमा रोक लगाउनुहोस्। आफ्ना रूढिवादी सोच / पुराना विचारहरूले तपाईंको प्रगतिमा बाधा ल्याउँछ, विकास गडबडाउँछ र अगाडि बढ्न बाधा दिन सक्छ। दिनको पछिल्लो भागको अनपेक्षित सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारको लागि आनन्द र खुशी ल्याउँछ। लामो समय पछि आफ्नो मित्रसँग भेट हुने सोचेर गुल्टिंदै गरेको ढुँगा झैं तपाईंको मनको ढुकढुकी बढ्न सक्छ। तपाईंले भर्खरै विकास गरेको व्यावसायिक संपर्कबाट पछि गएर लाभ हुनेछ। तपाईंको जीवनसाथी कहिल्यै आजभन्दा रमाइलो थिएनन्।
तपाईंलाई साह्रै तनाउ भएको महसुस भयो भने – बच्चाहरुसँग बढी समय बिताउनुहोस्। तिनीहरूको न्यानो अंकमाल / लुटुपुटु वा निर्दोष मुस्कानले तपाईंलाई आफ्नो दुःखबाट छुटकारा मिल्न सक्छ। तपाईंले वित्तीय लाभ हुने शानदार नयाँ विचार गर्नु हुनेछ। परिवारका सदस्यहरूले तपाईंको जीवनमा एउटा विशेष ठाउँ ओगट्नेछन्। आज आफ्नो प्रियको भावना बुझ्नुहोस्। महत्वपूर्ण मान्छेसँग अन्तरक्रिया गर्नाले तपाईंलाई राम्रो विचार र योजना ल्याउनेछ। आफ्नो जीवनसाथीले तपाईंलाई सबैभन्दा खुशी व्यक्ति बनाउन आज धेरै प्रयास गर्नेछन्।
आफ्नो दीर्घ रोग निको पार्न मुस्कान चिकित्साको प्रयोग गर्नुहोस् किनकि यो सबै समस्याको लागि उत्तम विषनाशक औषघि हो। तपाईंको आकर्षण र व्यक्तित्वले केही नयाँ मित्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। रोमान्सका लागि अवसर स्पष्ट छन् तर छोटो समयको लागि हुनेछन्। आज एउटा राम्रो कार्यको परिणामले कामका शत्रुहरू तपाईंका साथी हुन सक्छन्। आज, आफ्नो साथीले तपाईंलाई आफ्नो रमाइलो पक्ष देखाउन सक्छ।
तपाईंले सकारात्मक दृष्टिकोण र विश्वासले आफ्नो वरिपरिका मानिसहरूलाई प्रभावित पार्ने सम्भावना छ। अनुमानले लाभ हुनेछ। तपाईंको ज्ञानको तिर्खाले नयाँ मित्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। तपाईंको आफ्नो प्रिय / जोडीले गरेको फोनले तपाईंको दिन शुभ हुनेछ। तपाईं प्रमुख जमीनको सम्झौता राख्ने र मनोरञ्जन परियोजनामा धेरै मान्छे समन्वय गर्ने स्थितिमा हुनुहुनेछ। तपाईंको जोडीले थाहै नपाई साँच्चै शानदार केही कुरा गर्नेछन् जुन अविस्मरणीय हुनेछ।
शंकर सरकार ढाल्न विपक्षीको पुनः कसरत
२०७८ श्रावण १९, मंगलवार १२:५९
२०७८ साउन १८ गते, मंगलवारको राशीफल, बृश्चिक राशीको आकस्मिक खर्च बढ्नेछ
२०७८ श्रावण १९, मंगलवार ०७:२८
२०७८ साउन १८ गते, सोमवार को राशीफल, मेष राशीको निराशा र विश्वासको कमी
२०७८ श्रावण १८, सोमबार ०९:२३
आज, मकर र कुम्भ राशिका लागि फलदायी, कन्या राशिको आज परिबन्धले समस्या निम्त्याउन सक्छ
२०७८ श्रावण १७, आईतवार ०७:४९
आज, कर्कट, बृश्चिक र धनु राशिका लागि फलदायी, मकर राशिको आज बेसुरमा दिइएको वचनले समस्या निम्त्याउनेछ
२०७८ श्रावण १६, शनिबार ०७:५०
आज, बृष, तुला र कन्या राशिका लागि फलदायी, कर्कट राशिको आज कामकाे आशा देखाउनेहरूले धोका दिन सक्छन्
आज, मेष, धनु र मीन राशिका लागि फलदायी, बृश्चिक राशिको आज सहयोगीहरूले साथ दिन छाड्नेछन् र प्रगतिमा ईर्ष्या गर्नेछन्
२०७८ श्रावण १४, बिहीबार ०७:३३
आज, बृष, कन्या र तुला राशिका लागि फलदायी, मीन राशिको आज ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सजग रहनुहोला।
२०७८ श्रावण १३, बुधबार ०७:३८